शनिबार, २१ जेठ, २०७९
गीत खुब मन पर्ने । मन परेका गीत गुनगुनाउनुको मज्जै बेग्लै ! विद्यालय जाँदा होस् वा घरमै हुँदा अथवा कुनै काम गर्दा साथी गीत नै हुन्थ्यो । यो गुनगुनाइ भविष्यमा गायिका बन्छु भन्ने योजना सहित थिएन । थियो त केबल आत्मसन्तुष्टि । त्यही ‘आत्मसन्तुष्टि’ अहिले ‘गायिका’मा परिणत भएको छ ।
पहिले एकान्तमा छँदा गीत गुनगुनाउने बानी भए पनि उहाँ समूहमा गाउन भने लजाउनुहुन्थ्यो । आजकल भने स्टेज तताएर हजारौं दर्शकलाई मन्त्रमुग्ध पार्दै नचाउनुहुन्छ । “अहिले गायिका बन्नुरहेछ र पो मलाई सानैदेखि गीतप्रति आकर्षण बढेको रहेछ,” उहाँलाई हिजोआज यस्तै लाग्छ ।
उहाँ अर्थात् गायिका रेश्मा पुन मगर । घर बाँकेको कोहलपुर हो । चलचित्र, आधुनिक लगायत विधाका ३६ भन्दा बढी गीत गाइसक्नुभएको छ । पछिल्लो समय भने चलचित्र ‘कबड्डी–४’ मा समेटिएको ‘केशरी’ गीतले उहाँ चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ । उहाँले यस गीतमा ‘फिमेल भर्जन’ दिनुभएको छ । बजारमा उहाँका अरू पनि थुप्रै गीत छन् तर ‘आँखामा सपना केशरी, लजाउँदै नहेर त्यसरी’ बोलको यस गीतले भने दर्शक/स्रोतामाझ बढी चिनाउने काम गर्‍यो । टिकटकमा यो गीत 'भाइरल' जस्तै छ ।
सांगीतिक दुनियाँमा झण्डै सात वर्ष बिताइसक्नुभएकी रेश्मा ‘कृष्णसार आइडल’ पनि हो । बाँकेको नेपालगञ्जमा रहेको कृष्णसार एफएमले सञ्चालन गरेको ‘कृष्णसार आइडल’को उहाँ २०६८ सालको विजेता हुनुहुन्छ ।
कृष्णसार आइडल–२ की विजेता रेश्मा पुन मगर पुरस्कार राशी ग्रहण गर्दै । तस्वीर सौजन्य: कृष्णसार एफएम
‘कृष्णसार आइडल’ बनिसकेपछि रेश्मालाई गीत गाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास बढ्यो । “पहिले अलि अलि गीत गाए पनि गायिका बन्छु भन्ने थिएन । जब ‘कृष्णसार आइडल’ बनें त्यसपछि भने यही क्षेत्रमा भविष्य छ भन्ने लाग्यो । अहिलेसम्म सोचे जस्तै भइरहेको छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
आमाको मुहारमा खुशी छाएन !
रेश्माको गायनतर्फको रुचि र उहाँको मिठो स्वरको साक्षी उहाँसँगै पढ्ने साथी मनु अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । मनु कोहलपुरमा रहेको एउटा रेडियोमा बाल कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो । उहाँले कृष्णसार एफएमले ‘कृष्णसार आइडल’ सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । शुरूमा त रेश्मालाई त्यहाँ भाग लिने आँट आएन । साथीले ‘तिमी सक्छौ’ भनेर ढाडस दिएपछि भने आँट भरिंदै गयो र भाग लिने मनस्थितिमा पुग्नुभयो । तर, यो कुरा उहाँले परिवारमा कसैलाई थाहा दिनुभएन ।
एक दिन मनु र उहाँ कोहलपुरबाट नेपालगञ्जमा रहेको कृष्णसार एफएममा जानुभयो । “साइकल चढेर कोहलपुरबाट नेपालगञ्जसम्म गयौं । तर, त्यहाँ त फर्म भर्न दुई सय रुपैयाँ लाग्ने रहेछ । आफूसँग त्यत्रो पैसा थिएन, गाउँकी काकी नाता पर्नेसँग मागेर बल्ल तल्ल फर्म भर्‍यौं । त्यो सम्झँदा अहिले पनि अनौठो लाग्छ,” ती दिनका रमाइलोबारे रेश्मा बताउनुहुन्छ ।
फर्म भरेको केही हप्तापछि अडिसन भयो । अडिसनमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका करिब दुई सय बढी सहभागी थिए । पहिलो चरणको अडिसनमा रेश्मा छनोट हुनुभयो । त्यसपछि उहाँले बाँकेमै म्युजिक सिक्न थाल्नुभयो । यति हुँदासम्म पनि परिवारलाई यो कुरा थाहा थिएन । अडिसन भएको झण्डै एक वर्षमा टपटेनमा पुगिसकेपछि मात्र परिवारलाई थाहा भएको हो । “रेडियोमा बजेको आइडल सम्बन्धि प्रमोशनल विज्ञापन र मैले गाएको गीत सुनेपछि आमालाई थाहा भयो । तर, उहाँको अनुहारमा खुशी छाएन । गीतभन्दा अरू क्षेत्र भइदिएको भए सबै जना खुशी हुनुहुन्थ्यो होला तर गायन क्षेत्र भएर नै होला न बा खुशी हुनुभयो न आमा !” रेश्मा भन्नुहुन्छ । तर,आइडल बनिसकेपछि भने रेश्मालाई म गीत गाउन सक्छु । अब मेरो क्षेत्र यही हो भन्ने आत्मविश्वास बढ्यो ।
गीत गाउने अवसर
आइडल विजेता भइसकेपछि रेश्माले म्युजिक सिकाइलाई निरन्तरता दिनुभयो । उहाँको स्वर मन परेपछि म्युजिक सिकाउने गुरुले नै उहाँलाई गीत गाउने अवसर दिनुभयो । पहिलो गीत गाउँदाको अनुभव सुनाउँदै रेश्मा भन्नुहुन्छ, “पहिलो गीत गाउने कुरा गर्दा खुशी र नर्भस उत्तिकै थिएँ । चलचित्रको गीत हो तर कुन चलचित्र भन्ने बिर्सें । म्युजिक सिकाउने सर केशव बडुले गीत गाउने अवसर दिनुभएको हो ।”
“रेडियोमा बजेको आइडल सम्बन्धि प्रमोशनल विज्ञापन र मैले गाएको गीत सुनेपछि आमालाई थाहा भयो । तर, उहाँको अनुहारमा खुशी छाएन । गीतभन्दा अरू क्षेत्र भइदिएको भए सबै जना खुशी हुनुहुन्थ्यो होला तर गायन क्षेत्र भएर नै होला न बा खुशी हुनुभयो न आमा !”
म्युजिक सिक्नुभयो, एउटा गीत पनि गाउनुभयो तर यसपछिका दिनमा अघि बढ्न भने रेश्मालाई अलमल भयो । “उमेर पनि सानै थियो, चिनजानका कोही थिएनन् । त्यसपछिका ५/६ वर्ष घरमै बिते,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
संघर्षका पाइला काठमाडौंतिर
रेश्मालाई अब के गर्ने, कुन क्षेत्रमा अघि बढ्ने भन्ने दोधार भइरहेको थियो । यही बीचमा नेपालगञ्जको एउटा सांगीतिक कार्यक्रमको याद आयो । त्यस कार्यक्रममा सांगीतिक क्षेत्रमै काम गर्ने मामा नाता पर्ने एक जना हुनुहुन्थ्यो । रेश्माले उहाँसँग परामर्श लिनुभयो । उहाँले काठमाडौं जान सल्लाह दिनुभयो । त्यसपछि रेश्माको यात्रा काठमाडौंतर्फ लम्कियो ।
परिवारको असहमति, बिरानो शहर, सांगीतिक यात्राको कदम ! शुरूका दिन निकै संघर्षपूर्ण रहे । न चिनेका मान्छे, न चिनेको शहर तर पनि हिम्मत हार्नुभएन । सांगीतिक यात्रामा केही गर्ने आशाको पोको बोक्दै शहर छिर्नुभएकी रेश्मा सानेपामा मामाको घरमा बस्नुभयो । मामाको सल्लाह अनुसार म्युजिक क्लास लिन थाल्नुभयो । कालिकास्थानमा भोकल सिकाउने शिक्षक चण्डी काफ्लेले उहाँको मिहिनेत र स्वर सुनेर गीत गाउने चाँजोपाँजो मिलाइदिनुभयो ।
भरत लामाको शब्दमा रहेको ‘म पहाडको’ गीतमा रेश्माले स्वर दिनुभयो । गीतपछि आएको प्रतिक्रियाले थप हौसला मिल्यो । त्यसपछि विस्तारै यस क्षेत्रका साथीभाइसँग चिनजान बढ्दै गयो । गायक, लेखकसँग पनि चिनजान हुँदै गएपछि गीत गाउने अवसर मिल्दै गए । अहिले उहाँ यसै क्षेत्रमा जमेर लागिरहनुभएको छ । स्टेज शोका लागि देश विदेशबाट उहाँलाई निम्तो आउँछ ।
नेपाली समाज छोरीलाई एक्लै घर बाहिर गएको अहिले पनि राम्रो मान्दैन । त्यसमा पनि कलाकारिता क्षेत्रमाथिको दृष्टिकोण राम्रो छैन । रेश्माका आमाबुवा पनि यही समाजको पात्र, उहाँहरूलाई पनि त्यति राम्रो लागेन । “मेरो घरबाट त्यति असहयोग पनि भएन र राम्रोसँग सहयोग पनि भएन । छोरीले अरू नै काम गरेर यो क्षेत्रमा नलागे हुने भन्ने चाहना उहाँहरूले राखिरहनुभयो,” रेश्मा सुनाउनुहुन्छ ।
रेश्मा आमाबुवाको जेठो सन्तान । आफूभन्दा पछिका भाइबहिनीलाई उहाँले नै मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने थियो । आमाबुवालाई छोरीले पढाइ सकेर कमाओस् भाइबहिनीको पढाइ खर्चमा भरथेग गरोस् भन्ने चाहना हुने नै भयो । तर, उहाँ आफैं पनि सिकाइकै चरणमा भएकोले कमाइ त्यति राम्रो थिएन । उहाँ भन्नुहुन्छ, “गीत गाएर बाँच्न नसकिने भन्ने होइन । धेरैले गाएर नै राम्रो कमाइराख्नुभएको छ तर शुरूका दिनमा सबै चिजको समस्या भयो ।”
गायन क्षेत्रका मान्छे चिन्दै, सिक्दै अघि बढिरहेकै अवस्थामा कोभिड–१९ को महामारी फैलियो । देशभर लकडाउन भयो । लकडाउनमा घरभित्रै बस्नुपर्दा हुन लागेका काम पनि बन्द भए । मेला महोत्सव ठप्प भए । पाएका गीत पनि रेकर्ड गर्न पाइएन । तर अहिले बिस्तारै अवस्था सहज हुँदै गएको छ । रेश्मा पनि रेकर्डिङ र स्टेज कार्यक्रमहरूमा व्यस्त हुन थाल्नुभएको छ । “संघर्ष गरेर यहाँसम्म आइपुगेको छु । अझै पनि संघर्ष गरिरहनेछु,” बेलाबखत काम गर्दाका अप्ठेरा सम्झेर किन यस क्षेत्रमा लागेछु भन्ने लाग्दैन ? भन्ने प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ, “काम गर्न जुनसुकै क्षेत्रमा गाह्रो हुन्छ । तर, अहिलेसम्म किन यो क्षेत्रमा लागेछु भन्ने भएको छैन । अहिलेसम्म यसैमा रमाइरहेको छु । भोलिका दिनमा त के हुन्छ, कसले भन्न सक्छ र !”
चलचित्र कबड्डी–४ को गीत हो केशरी । एसडी योगीको शब्द र संगीत रहेको यो गीत राम अविरल बिस्टको स्वरमा रेकर्ड भएको छ । यो गीत बजारमा आइसकेपछि राम्रो प्रतिक्रिया पाउँदा महिलाको आवाजमा पनि रेकर्ड गर्ने कुरा भयो । अनि उक्त मौका रेश्मालाई मिल्यो । उहाँले गाउनुभएको यो गीत थोरै समयमा टिकटक र युट्युबमा राम्रो चल्यो । यही गीतमार्फत रेश्मालाई स्रोता र दर्शकले अझ चिने । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यस्ता गीतहरू धेरै गाएँ । चल्न पनि चलेकै छन् । तर पनि यो गीत मेरो जीवनको टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो ।”
अनि रेश्मा र 'क' को संयोग पनि कस्तो परेको छ भने 'कृष्णसार आइडल'बाट सुरु भएको रेश्माको सांगितिक करिअर 'केशरी' गीतले उचाईंमा पुर्याएको छ ।
प्रकाशित: Saturday, June 04, 2022 | 07:02:00 शनिबार, २१ जेठ, २०७९